Izindaba - Ngenisa indwangu yendwangu ye-PP encibilikisiwe
Ngenisa indwangu yendwangu ye-PP encibilikisiwe
Indwangu eshisiwe ye-Melt (indwangu encibilikisiwe engavukiwe) ingumkhiqizo owenziwe ngendwangu yokuncibilika ephezulu ye-PP (polypropylene) yendwangu engeyona eyelukiweyo. Kuyinto esemqoka yemaski. Ububanzi be-fiber ye-spinneret bungafinyelela ku-0.001 kuye ku-0.005 mm. Kukhona ama-void amaningi, ukwakheka okuluhlaza, ukumelana okuhle kombimbi, kanye nesakhiwo esihlukile se-capillary. Imicu ye-Ultrafine inyusa inani nendawo yendawo yemicu endaweni ngayinye yeyunithi, ukuze indwangu encibilikayo ibe nokuhlunga okuhle, ukuvikela, ukufudumeza ukushisa nokumunca uwoyela. . Ukusetshenziswa kwayo okuyinhloko kufaka phakathi ukuhlunga umoya, ukuhlunga uketshezi okwephula i-asidi, ukuhlunga ukudla kwenhlanzeko, ukukhiqizwa kwemaski okufakazela uthuli, njll. Ngaphezu kwalokho, kungasetshenziswa futhi njengemikhiqizo yezokwelapha nenhlanzeko, ukusulwa ngokunemba kwezimboni, izinto zokwambathisa ezishisayo, uwoyela- izinto zokumunca, izihlukanisi zebhethri, nezindwangu zesikhumba mbumbulu. nezinye eziningi. Selokhu kwaqubuka ubhadane lomqhele omusha emhlabeni jikelele, iKhomishini Yezokulawulwa Kwezimpahla Nezokuphatha zoMbuso woMkhandlu Wombuso icele izinkampani ezifanele ukuthi zisheshise ukwakhiwa kolayini bokukhiqiza, bafake ekukhiqizeni ngokushesha okukhulu, futhi bandise ukulethwa kwama-meltblown nonwovens emakethe ukuhlinzeka ngokuvikelwa nokulawulwa kwalo bhubhane.
Izindawo ezijwayelekile zokufaka izindwangu ezingezona ezelukiwe:
1.Ukusebenza emkhakheni wokuhlanzwa komoya: okusetshenziselwa ukuhlanza umoya, njengesihlungi somoya esisebenza kahle kakhulu, futhi kusetshenziselwa ukuhlunga komoya okuhhadlazayo naphakathi nendawo okunamazinga amakhulu okugeleza. Inezinzuzo zokumelana okuphansi, amandla aphezulu, ukumelana okuhle kwe-asidi kanye ne-alkali, ukumelana nokugqwala, ukusebenza kahle okuzinzile, impilo yenkonzo ende, nentengo ephansi.
3.Isihlungi se-Liquid impahla kanye ne-diaphragm yebhethri: Indwangu eshisiwe ye-polypropylene isetshenziselwa ukuhlunga uketshezi olune-acid ne-alkaline, uwoyela, njll. Kunokusebenza okuhle kakhulu, kubhekwe njengempahla enhle yedayaphragm yimboni yebhethri ekhaya nakwamanye amazwe, futhi isetshenziswe kabanzi, Ayinciphisi kuphela izindleko zebhethri, yenza inqubo ibe lula, futhi inciphisa kakhulu isisindo nomthamo webhethri.
4. Izinto ezimunca uwoyela nokusula kwezimboni: izinto ezahlukahlukene ezimunca uwoyela ezenziwe ngendwangu ye-polypropylene meltblown, engakwazi ukumunca uwoyela kuze kube izikhathi eziyi-14-15 isisindo sayo, isetshenziswa kakhulu kumaphrojekthi wokuvikela imvelo kanye namaphrojekthi wokuhlukanisa amanzi no-oyela. Ngaphezu kwalokho, zisetshenziselwa ukukhiqizwa kwezimboni. , Ingasetshenziswa njengento ehlanzekile yamafutha nothuli. Lezi zinhlelo zinikeza ukudlala okugcwele kuzici ze-polypropylene uqobo kanye nokukhishwa kwezintambo ze-ultrafine ezenziwe yi-meltblown.
5. Izinto zokwambathisa ezishisayo: Ububanzi obumaphakathi bezintambo ezincibilikayo ziphakathi kuka-0.5-5μm, futhi zenziwa ngqo zaba yizindwangu ezingalukiwe ngokubeka okungahleliwe. Ngakho-ke, indawo ethile yocingo lwe-meltblown inkulu futhi i-porosity iphakeme. Inani elikhulu lomoya ligcinwa kulesi sakhiwo. , Ingavimbela ngempumelelo ukulahleka kokushisa, iyinto enhle yokuhlunga nokufaka izinto. Isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izingubo nezinto ezahlukahlukene zokufudumeza ezishisayo. Njengamajakhethi esikhumba, amahembe okushushuluza, izingubo ezingenamakhaza, indwangu kakotini, njll. Inezinzuzo zesisindo esincane, imfudumalo, akukho ukumuncwa komswakama, ukungena komoya okuhle, futhi akukho sikhutha.